Fitaovana sy orinasa vita amin'ny vera vita amin'ny vera any Sina | Tsara loatra
vata fampangatsiahana varavarana fitaratra & cooler
Vata fampangatsiahana volamena mandeha na fampangatsiahana zava-pisotro misy alikaola ...
Varavarana fitaratra LED ho an'ny vata fampangatsiahana marika na cooler na bar be ...
Integral blinds glazing indroa
Miaraka amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fanodinana vera sy ny fanamafisana ny fahalalan'ny olona ny fahombiazan'ny vera fitaratra, ny fatra fampiharana ny vera fitaratra dia tsy mitsaha-mivelatra. Ho fanampin'ny fampiharana malalaka amin'ny rindrin'ny ambainy fitaratra, fiara, fiaramanidina ary lafin-javatra hafa, niditra tao an-tranon'ireo olon-tsotra ny fitaratra mitaingina.
Izany dia satria ny fampiharana vera fitaratra dia afaka manatsara ny insulation hafanana sy ny vokatry ny insulation ny varavarana sy ny Windows, hany ka ny varavarana sy ny vokatra Windows dia tsy vitan'ny fialofana amin'ny rivotra sy ny orana, fa koa misy fiantraikany amin'ny angovo lehibe, mampihena ny vidiny ny fanafanana amin'ny ririnina ary ny fihenan'ny fahavaratra. Mandritra izany fotoana izany, ny vera mitaingina no be mpampiasa ao amin'ny faritra fampangatsiahana, indrindra ny vata fampangatsiahana / cooler amin'ny varotra. Amin'ny maha-ampahany lehibe amin'ny varavarana mangatsiaka / mangatsiaka kokoa, ny fampiasana vera voaroaka dia nampihena be ny fanjifana angovo ary fitaovana maintso tena mety.
Noho izany ny varavarana fitaratra mangatsiaka / varavarana mangatsiaka kokoa ary ny varavarankely tsy mitapitra sy varavarana miharo volo dia vokatra lehibe ho an'ny mpanjifantsika manerantany. Noho izany dia manome vera voaroaka isika miaraka amin'izay.
Famaritana ny fitaratra voaroaka tsara toy izao manaraka izao.
1. Ny karazana vera dia tsy maintsy atao ao anatin'izany ny vera mazava, ny vera ambany E, ny vera tsy manafana & mafana.
2. Ny endrika fitaratra dia namboarina: vera fisaka & vera miolaka.
3. Ny haben'ny vera dia namboarina.
4. Ny valin'ny vera dia namboarina, ny fangatahana iraisana dia roa, telo ary efatra.
Tongasoa eto amintsika hifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny na hanao fanadihadiana.
Teo aloha: Extrusion PVC Profile sy Aluminium Alloy Profile
Manaraka: Integral blinds glazing indroa
Glass fananganana sinoa
Fitaovana fanorenan'i Sina
Glass verinia Venetian vita amin'ny glazy indroa
Sina Gila fitaratra roa
Vera voaravaka ho an'ny varavarankely sy varavarana
Vata fitaratra voaroaka